गरेका छन् । उनले निकै सुस्त गतिमा निर्माण भइरहेको नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको अनुगमन गरेका हुन् । उनले आयोजना र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधीसंग जानकारी लिनुका साथै काम छिटो सम्पन्न गर्न कडा निर्देशन दिएका छन् । प्रदेश ३ को मुख्य सडकखण्ड रहेको भन्दै उनले तोकेको समयमा काम सम्पन्न नगरे कारवाही गर्ने चेतावनी दिए । उनले विभिन्न वाहानामा आयोजनाको म्याद पटक–पटक थप्न नपाइने वताए । ठुला आयोजनामा भ्रष्ट्रचार मौलाएको भन्दै उनले नितिगत सुधारको आवश्यकता रहेको वताए ।
यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मरकट्टेलले नितिगत रुपमा सुधार गरेर विकास निर्माणका काम तिव्र गतिमा गरिने वताए । २०१५ को अप्रिलमा सुरु भएको उक्त सडक बिस्तारको कामको तिन पटक सम्म म्याद थप गरिसकिएको छ । पछिल्लो म्याद अनुरुप २०१८ को फेब्रुअरी २० सम्ममा काम सक्नुपर्ने हुन्छ । तर सो मितीसम्ममा काम नसकिने देखिएपछि करिब ३ महिना म्याद पुन थप्ने थयारी भइरहेको छ । यसरी पटक पटक म्याद थप्ने तर काम नहुने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने मन्त्री जम्मरकट्टेले बताए । सडकको अनुगमनसंगै मुख्यमन्त्री पौडेलले दासढुङगामा स्वर्गिय जननेता मदन भण्डारी र जिवराज आश्रितको शालिकमा माल्यार्रपण समेत गरेका थिए । सो अनुगमनमा प्रदेश नम्बर ३ का सभा सदस्यहरु विजय सुवेदी,दावा दोर्जे लामा,रिना गुरुङ लगाएतको सहभागिता रहेको थियो ।
गुणस्तरिय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि दवाव दिने उदेश्यले चितवनमा स्वास्थ्य सञ्जालको गठन गरिएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले चितवनमा सोमबार स्वास्थ्य अधिकार तथा सूर्ति नियन्त्रण जिल्ला सञ्जालको गठन गरेको हो । सञ्जालमा उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्चका पदाधिकारी लगायत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाका प्रतिनिधि लगायत सञ्चारकर्मीहरु रहेका छन् । स्वास्थ्य अधिकार तथा सूर्ति नियन्त्रण जिल्ला सञ्जालमा ११ सदस्यिय समिति गठन गरिएको एक सदस्य तारा बरालले जानकारी दिइन् । सरकारले जनतालाई बिभिन्न किसिमका योजना ल्याएर स्वास्थ्य सेवा सर्बशुलभ बनाउने कोशीस गरेता पनि जनता त्यो सेवा सुबिधाबाट बञ्चित हुन परेको अवस्था कायमै रहेकोले समितिले समन्वयात्मक रुपमा कार्य गर्ने जनाएको छ । स्वास्थ्य सेवामा अहिलेको परिपेक्षमा निजि क्षेत्र हाबी भएको गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा दिन समिति गठन गरिएको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्त लाल मुल्मीले बताए । उने गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुच हुनुपर्नेमा जोड दिए । जनताको स्वास्थ्य अधिकार प्रत्याभुतिका लागि समितिले कार्य गर्ने उनले वताएका छन् । उनले कार्यक्रममा स्वास्थ्य अधिकार र बिभिन्न अभियानका बारेमा कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्ने अधिंकाश बक्ताहरुले स्वास्थ्य क्षोत्र संबेदनशिल भएकाले प्रभाबकारी निति नियम संगै प्रभाबकारी अनुगमन र सेवा सर्बसुलभ हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
पूर्वी चितवनको रत्ननगरमा स्थानीयको मुठीदानबाट श्रीकृष्ण प्रणामीको कलात्मक मन्दिर निर्माण गरिएको छ । मन्दिर भित्र र बाहिर विभिन्न देवी देवताका कलात्मक तस्वीरहरु कुँदिएका छन् । भारतवाट ल्याइएको कालिगढहरुले १२ वर्ष लगायर कलात्मक शैलीको मन्दिर बनाएका हुन । प्रणामीहरुले दैनिक संकलन गर्दै आएका मुठिदानवाट यो मन्दिर निर्माण गरिएको हो । दैनिक रुपमा ६ सय प्रणामीहरुले मुठिदान गर्दै आएका छन् । मुठिदान बाहेक रत्ननगर नगरपालिका र चितवनको क्षेत्र नं. १ का सांसदहरुले विनियोजन गरि दिएको केही रकमले मन्दिर निर्माणमा खर्च गरिएको छ । पाँचकरोड रुपैयाँ खर्च गरेर निमार्ण भइरहेको श्रीकृष्ण प्रणामीको कलात्मक मन्दिरको फागुन ८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । रत्ननगर नगरपालिको वडा नं. ११ स्थ्ति जिरौनामा निर्माण गरिएको मन्दिरे स्थापना भएको ५० वर्षको अवसरमा मन्दिरको उद्घाटन गर्न लागिएको हो । मन्दिर उद्घाटन संगै सप्ताहाव्यापी कार्यक्रम गरेर मन्दिरले स्वर्ण महोत्सव मनाउने तयारी गरिएको श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तिलकराज शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार उद्घाटन पूर्व फागुन ५ गतेदेखि श्रीमत् तारतम सागर १०८ पाठपारायण ज्ञान महायज्ञ संचालन गरिने छ । महायज्ञ फागुन १२ गते सम्म चल्ने छ । श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मका धर्माचार्य जगतगुरु श्री १०८ कृष्णमणिजी महाराजश्री लगायत महायज्ञमा नेपाल, भारत लगायत अन्य राष्ट्रका सन्त, गुरुजन लगायत एकलाख श्रद्धालु भक्तजनहरुको उपस्थित रहने महायज्ञ आयोजक मूल समारोह समितिले जानकारी दिएको छ । महायज्ञ सफल बनाउन १ हजार ८ सदस्यीय मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ भने ३८ वटा विभिन्न उप–समितिहरु गठन भएका छन् । स्वर्ण महोत्सवको अवसरमा आयोजना गरिने सप्ताहा कार्यक्रममा झण्डै ४५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने मूल समारोह समिति संयोजक पौडेलले जानकारी दिए ।
भरतपुरमा सम्पन्न भएको तेस्रो ईन्डोनेपाल मुवाँथाई प्रतियोगितामा चार स्वर्ण पदक सहित नेपाल पहिलो भएको छ । सोमबार भएको फाइलन खेलमा ईन्डोनेपाल मुवाँथाइ अन्तर्गत पाँच वटा प्रतिस्पर्धा भएकोमा भारतले एउटा स्वर्ण पदकमा चित्त बुझाएको छ । नेपालको तर्फबाट ८१ किलो तौल समूहमा सन्देश मानन्धर, ७० किलो तौल समूहमा सचिन्द्र मानन्धर ५६ किलो तौलमा राहुल ठकर लामा र ६० किलो तौलमा गुणराज रुचालले स्वर्ण पदक जितेका छन् । ५० किलो तौल समूहमा भएको खेलमा भने भारतका एस आर भसान्तले स्वर्ण पदक जितेका छन् । प्रतियोगितामा नेपाल र भारतका १० जना खेलाडीहरु सहभागी भएका थिए । नेपालका तर्फबाट स्वर्ण पदक जित्ने चार जनै खेलाडी नेपाल आर्मीका भएका नेपाल राष्ट्रिय मुवाँथाई संघका अध्यक्ष गणेशलाल कोलाक्षपतीले जानकारी दिए । ५६ किलो तौल समूहमा स्वर्ण पदक जितेका राहुल ठकर लामा यस अगाडि कम्बोडियामा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुवाँथाई प्रतियोगिताको समेत स्वर्णपदक विजेता खेलाडी भएको कोलाक्षपतीले जानकारी दिए । त्यस्तै, चौथो राष्ट्रिय मुवाँथाई प्रतियोगितामा चार वटा स्वर्ण पदक जित्दै काठमाडौँ पहिलो भएको छ । सोमबार भएको फाइनल खेलमा चितवनले एउटा मात्रै स्वर्ण पदक प्राप्त गरेको छ भने अन्य जिल्लाहरु पदक विहिन बनेका छन् । काठमाडौँले पुरुषतर्फ तीन वटा स्वर्ण र महिला तर्फ एउटा स्वर्ण पदक हात पारेको हो । ५५ किलो तौल समूहमा काठमाडौँका सत्यसिंह सुनार, ६० किलो तर्फ काठमाडौँका सन्तोष मगर र ६५ किलो तौलमा काठमाडौँकै सलाम लोप्चाले स्वर्णपदक प्राप्त गरेका छन् । उक्त प्रतियोगितामा ७५ किलो तौल समूहमा भने चितवनका दिवसलाल भूमीले स्वर्ण पदक जितेका हुन् । त्यस्तै, महिला तर्फ काठमाडौँकी दिव्या गुरुङले स्वर्ण पदक जितेकी थिइन् । चौथो राष्ट्रिय मुवाँथाई प्रतियोगितामा ३६ जना खेलाडी सहभागी भएकामा चार जना महिला खेलाडीले समेत प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
भरतपुर नगर तामाङ समाज चितवनले विविध कार्यक्रम गर्दै फागुन ४ गते सोनाम ल्होछार मनाउने भएको छ । तामाङहरुले नयाँ वर्षको रुपमा मनाउने ल्होछार यस वर्ष फागुन ४ गते मनाउन लागेका हुन् । मञ्जुश्री सम्वत् अनुसार तामाङ समुदायले यस वर्ष २८५४ औँ सोनाम ल्होछार मनाउन लागेका हुन् । तामाङ समुदायको ल्हो परम्परा अनुसार हरेक वर्ष एउटा जनावरले शासन गर्ने गर्दछ । तामाङ समुदायले यस वर्ष खिल्हो कुकुर वर्गको अवसरमा विविध कार्यक्रम गर्न लागेको भरतपुर नगर समाजका अध्यक्ष गंगालाल लामाले बताए । तामाङ जीवनको महत्वपूर्ण कार्यहरु छेवर, पास्नी, बिवाह, मृत्यु मात्रै नभएर परदेश जाने, घर बनाउने काममा समेत ल्हो खाम हेर्ने परम्परा रहेको लामाले बताए ।
तामाङ समुदायले भरतपुर ११ गोन्द्राङमा रहेको छेच्यू थर्पलिङ गुम्बामा भव्य कार्यक्रम गर्दैै ल्होछार मनाउन लागेको सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ । तामाङ जातिले ल्होछार पर्वलाई भव्य रुपमा सम्पन्न गर्नको लागि विभिन्न आठ वटा उपसमिति निर्माण गरेका छन् । पर्वको अवसरमा जनगायक एवम् तामाङ समुदायका अगुवा व्यक्ति स्वर्गीय खुसीराम पाख्रिनको परिवारलाई सम्मान गरिने समेत पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । भरतपुरका दुई सय ७० घरधुरी भरतपुर नगर तामाङ समाजभित्र आवद्ध भएको भएपनि चितवनमा ६५ हजार भन्दा बढी तामाङहरु बसोबास गर्दै आएका लामाले जानकारी दिए । ल्होछारको अवसरमा उक्त गुम्बामा सम्मान, रक्तदान, सांस्कृतिक कार्यक्रम जस्ता विविध कार्यक्रम आयोजना गरिदैछ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्वर ३ को चितवनमा सम्पन्न दोस्रो बार्षिक प्रदेशसभाले ७ बुंदे निर्णय सार्वजनिक
उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्वर ३ को चितवनमा सम्पन्न दोस्रो बार्षिक प्रदेशसभाले ७ बुंदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । २ दिनसम्म भरतपुरमा चलेको भेलामा नीजि क्षेत्रका समस्या, चुनौती, अवसर र आगामी कार्यदिशाका वारेमा छलफल गरिएको थियो । भेलाको निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमवार भरतपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ प्रदेश नम्वर ३ का अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले कर प्रणाली व्यवस्थित गरि उद्योगमैत्री बातावरण सृजनाका लागी उवासंघ अग्रसर हुने वताए । उनले भेलामा भएको छलफलबाट उठेका विषयहरु कार्यान्वयन लैजान प्रदेश समितिले पहल गर्ने वताए । भेलाले उवासंघको सदस्यता लिएर सामान प्रकृतिका अन्य संघ सस्थामा सदस्यता लिए खारेज गर्ने अधिकार पदाधिकारीलाई दिने निर्णय गरेको छ । मेला महोत्सव व्यवसायीक प्रतिनिधीमूलक संघ संस्थाहरुले मात्रै गर्न पाउनुपर्ने माग प्रदेश भेलाको छ । कर प्रणाली व्यवस्थित गर्दै व्यवसाय दर्ता तथा खारेज गर्दा उद्योग वाणिज्य संघको सिफारिस हुनुपर्ने धारणा संघको निर्णयमा उल्लेख छ । बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको कर्जा प्रवाह झन्झटिलो भएको भन्दै भेलामार्फत त्यसलाई सहज वनाई व्याजदर बढाउनेकाम रोकिनुपर्ने माग गरिएको छ । न्यून विजकिकरणको समस्या समाधान गरेर स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनमा ठोस कामका लागी पहल गर्ने संघले जनाएको छ । देशमा लगानीमैत्री बातावरण निर्माण गरी आगामी १० बर्षलाई राष्ट्रिय उत्पादन दशकका रुपमा सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग छ ।
चौथो चितवन च्याम्पियनसिप कप फुटवल प्रतियोगिता अन्तर्गत आइतबार भएको खेलमा जु फुटबल क्लब जुगेडी विजयी
तीनवटै विभागीय टिम र काठमाडौंको शिवम् न्यू डायमण्ड एकेडेमी सेमीफाइनलमा प्रवेश
तेस्रो इन्डो–नेपाल मुवाँथाई तथा चौथो राष्ट्रिय मुवाँथाई एवम् वृहत तेकवान्दो प्रतियोगिता सुरु